Maleeshiyaad hubeysan oo dad ka afduubtay degaan ka tirsan Hiiraan - Awdinle Online
Wararka naga soo gaaraya degaanka Goobo oo 11 km u jira degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in maleeshiyaad hubeysan ay dad ka afduubteen degaankaas.
Maleeshiyaadka hubeysan ayaa dadkaasi oo gaaraya 8 rag ah kala egay Gaari ay saarnaayeen oo ka yimid dhinaca degmada Guriceel, isla markaana kusoo jeeday Magaalada Muqdisho.
Maleeshiyaadka afduubka geystay ayaa gobjoogayaal sheegeen inay u abaabul naayeen hab beeleed, isla markaana arrintaan ay salka ku heyso dilal dhawaan ka dhacay inta u dhaxeysa degmada Matabaan iyo degmada Guriceel.
Maamulada Galmudug iyo Hir-Shabeelle weli kama hadlin falkaasi afduubka ah, hayeeshee waxaa xusid mudan in todobaad ka hor degaano hoostaga degmada Matabaan siyaabo kala duwna loogu dilay dad shacab ah oo wadada ku safrayay.
Previous articleJaneraal Xuud oo digniin culus u diray Ciidamada ku sugan Magaalada Beledweyne
Next articleKulamo looga hadlayo khilaafka doorashada oo bilaabanaya